१५ वर्षकी छोरीलाई बेहुली बनाउँदाको अनुभव यस्तो छ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper १५ वर्षकी छोरीलाई बेहुली बनाउँदाको अनुभव यस्तो छ	१५ वर्षकी छोरीलाई बेहुली बनाउँदाको अनुभव यस्तो छ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper १५ वर्षकी छोरीलाई बेहुली बनाउँदाको अनुभव यस्तो छ
१५ वर्षकी छोरीलाई बेहुली बनाउँदाको अनुभव यस्तो छ
प्रकाशित: ६ पुष २०७७, सोमबार
काठमाडौं । लोकप्रिय गायक रमेशराज भट्टराई पछिल्लो समय सर्वाधिक चर्चाको शिखरमा रहेका गायक हुन् । ‘बहुला’ गीत बजारमा ल्याएपछि उनको गायनको चर्चाले शिखर चुम्न पुग्यो । लामो समयसम्म गायन क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदा रहँदै पनि धेरै पछि चर्चाको शिखरमा पुगेका उनी त्यसपछि निरन्तर चर्चाकै शिखरमा छन् ।
गायक रमेशराज भट्टराईले बजारमा ल्याएको पछिल्लो गीत हो ‘राजा’ । बहुला–३ राजा नाम दिइएको यो गीत बहुला गीतको सिक्वेलका रुपमा बजारमा आएको हो । यस गीतबाट आफ्नी छोरी सुप्रिमा भट्टराईलाई अभिनयमा डेब्यू समेत गराएका छन् । दुर्गेश थापासँगको केमेष्ट्रिमा छोरीलाई अभिनय गराएका उनले बहुला–३ (राजा)मा शब्द, संगीत र स्वर दिएका छन् । यस गीतको परिकल्पना भने मनोज डुम्रेको रहेको छ । भिडियोलाई विक्रम चौहानले निर्देशन गरेका हुन् । अजय रेग्मीको छायाँकन रहेको यस भिडियोलाई मिलन विश्वकर्माले सम्पादन गरेका छन् ।
शान्तिराम, शक्ति बल्लव र प्राश्नाको ‘भाग्य लेख्ने मसी’
निःसन्तान महिलाको पीडामा चलचित्र निपुत्र
AAMALE PAKAYAKO DAR आमाले पकाएको दर
समाजको यथार्थ चित्रण गर्दै सार्वजनिक भयो जितेन्द्र बानियाँको सेतो साडी
मिना निरौला भन्दा पनि ठमेल बजारकी गायिका भनेर चिनाउँछन् ।
नारीलाई श्रृंगारिक रुपमा मात्र प्रस्तुत गरियो, त्यो मलाई स्वीकार छैनः रेखा थापा